Ihe choro maka odi nma Kpachara anya na nchekwa mgbe ị na-eji aminoguanidine hydrochloride, n’ihi na ọ bụ kemịkal na-egbu egbu. Ọ bụrụ na enwere nsogbu nchekwa, ọ nwere ike ịnwe oke mbibi. Ihe ndị a bụ ihe ndị achọrọ maka iji nchekwa. ...
Njirimara chemical na ngwa nke p-hydroxybenzaldehyde
A na-eji kemịkal nke p-hydroxybenzaldehyde P-hydroxybenzaldehyde mee ihe nke ọma na ọgwụ, ihe ịchọ mma, nri na mpaghara ndị ọzọ, yana ntinye ngwa ya ka na-agbasa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye egwu zuru oke na arụmọrụ ya ...
Aminoguanidine bicarbonate bụ kemịkal na-egbu egbu, yabụ na ọ nwere ihe pụrụ iche chọrọ na nchekwa nkịtị. Ọ dị mkpa ịchekwa ha iji hụ nchekwa nke ngwaahịa na ndị ọrụ. Ndị a bụ ụfọdụ nlekọta nchekwa ị kwesịrị ịmara. 1 ...